Kitapo Resin-tariby tsy tantera-drano
Ireo resin-tariby tariby resin an-tsipika ireo dia ho an'ny fampiharana fampifangaroana tariby anaty tany na anaty rano. Fampifangaroana tariby SENTUO mety ho an'ny tariby polimerika mifono vy mifamatotra, mpitazona varahina mihantona, miaraka amin'ireo mpampitohy crimped. Ny fantsom-pifandraisana dia misy lasitra fanindronana, akorandriaka torpedo miaraka amina famolavolana tampoka ..
Ny tontolon'ny fananganana tonelina sy ny fametrahana tariby dia sarotra dia mitaky ny vokatra manokana. Ny famolavolana optimum an'ny fametrahana sy ny fitambaran-tariby amin'ny vokatra dia manamora kokoa ny fametrahana sy ny fampandehanana.
Izy io dia mety amin'ny tsipika lehibe latsaky ny 30mm, tsipika sampana latsaky ny 25mm.
Vata fitifirana plastika
Izy io dia vita amin'ny fitaovana toy ny ABS sy PC, sns, endrika ivelany mirindra, fahamendrehana avo. Ny vatana sy ny fonony mitambatra dia raikitra amin'ny visy plastika efatra izay sarotra esorina. Ny famaritana sy ny habeny dia azo noforonina miorina amin'ny filan'ny mpanjifa. Toe-karena sy takatry. Hajaina1 / 4 lanja vata vy fotsiny, hanamorana ny fikirakirana sy ny fiasa, tsy misy harafesina, mora insulation.
Ity dia boaty fizarana kilasika .izay azo ampiarahana amin'ny herinaratra modular isan-karazany ho an'ny asan'ny fizarana herinaratra terminal.
Ampiasaina be amin'ny tambajotram-panomezana herinaratra ambany izy io ho an'ny famatsiana herinaratra ho an'ny mpanjifa sy trano fivarotana.